Ikrashi yakhendi 1532 - Umdlalo weCandy Crush - Free Lives Tips Cheats Hints
You are here: Home / Uncategorized / Ikrashi yakhendi 1532
Last updated on EyeKhala 16, 2021 By Isobella Franks Leave a Comment
Uyilinganisela njani impumelelo kwihlabathi lanamhlanje? Kulungile, yinto elula umntu aphumelele kuyo ukuba ugqibezela imisebenzi enzima ngaphandle kokukhathazeka. Uya kujongana neemeko ezininzi ezinobunzima. Ngaba uza kunikezela nje? Ukuba uyayenza, emva koko awunakubuva ubumnandi bempumelelo. Yilapho umdlalo weelekese ukuvavanya ukuvavanya. Izisa imisebenzi enzima kwaye ikubuze ukuba uyigqibe ngexesha elichaziweyo.
Awunakho ukugqiba yonke imisebenzi ngokukhululekileyo. Ufuna isikhokelo ukuba unamathele kakubi. Sivile ukuba abantu bahlala bexakekile Ikrashi yakhendi 1532 inqanaba. Ngaloo ndlela, Ifuna amanyathelo afanelekileyo okuyoyisa, njengoko inzima. Siza kukunceda kule meko unikezele ngeengcebiso ezithile kunye namaqhinga ahambelana Ikrashi yakhendi 1532 inqanaba.
Onke amanqanaba okutyunyuzwa kweelekese aneenjongo ezimiselweyo. Ukuba ufuna ukubetha elo nqanaba, Kuya kufuneka ugcwalise loo njongo. Kwi Ikrashi yakhendi 1532 injongo kukuqokelela 1 hazelnut kunye 1 Itsheri. Ngaxeshanye, kufuneka uqokelele 75000 amanqaku. Kwakhona, 20 uhamba okanye ngaphantsi kufuneka uthathwe ukufezekisa oku. Zizonke zikhona 5 iilekese kunye 59 iindawo ezikhoyo. Kufuneka ucwangcise iintshukumo zakho ngokufanelekileyo.
Ikrashi yakhendi 1532 iingcebiso kunye namacebo
Umbuzo uhlala uhleli ukuba ungasondela njani kwinqanaba le-candy crush? Ukuba indlela yakho ayilunganga kwasekuqaleni, uya kubambeka ngelinye ixesha. Ukuqala nge, kufuneka ucwangcise iintshukumo zakho zokuqala kwaye uhambe ngokufanelekileyo ukugqiba eli nqanaba.
Okokuqala, kufuneka uzise iilekese zombala ezihambelanayo kwikona esezantsi ekunene. Qala ukulungiselela ilekese esityumzayo ukulahla ezi iilekese umbala ehambelanayo.
Ungavumeli ukuba izithako zihambe ziphume kumthuthi njengoko ziya kubuya kumdlalo. Ngenxa yoko, ukuhamba kwakho kungamosha
Nanini na xa uya kuzama ukutyumza iilekese, izakuhamba iye ngasekunene kwabo. Ingcebiso yethu iya kuba kukwenza iilekese ezizodwa endaweni yokutyhala isithako yonke indlela. Eli nqanaba lifuna ukuba wenze isithako sokuphuma. Ngapha koko, esi sithako siyaphuma kwaye umthumeli wefowuni uyisusa kumdlalo ungasekunene ngasezantsi.
Yonke ibhanti yokuhambisa ingasekunene. Nangona kunjalo, nasiphi na isithako xa sibuyisiwe siya kungena ukusuka kumqolo ongezantsi wasekhohlo. Kwakhona, ukuba ubuyile iintshukumo zakho ziya kumoshwa.
Ukuba uthumela ezi zithako kude, uya kufumana 20,000 amanqaku. Oku kulingana nenxalenye enye ekujoliswe kuyo.
Nantsi indlela omele ukusondela ngayo kulo mdlalo. Ifuna ucwangciso olufanelekileyo. Ukuba awuqalanga kakuhle kwasekuqaleni uza kugqiba ulahlekelwe sisiqwenga. Ngapha koko, zama ukuqiniseka ukuba ukuhamba kwakho akonakalisi. Yonke intshukumo kufuneka isetyenziswe ngononophelo njengoko ixabisekile. Ukuba uhamba ngokwesicwangciso ekugqibeleni uyakugcina uphumelele eli nqanaba. Khawukhumbule nje injongo yokugqibela kwaye uqiniseke ukuba uhamba ngokufanelekileyo.